Apple Kubatanidza iCloud Zvinyorwa uye Dhata Service neICloud Drive muna Chivabvu 2022 | Ndinobva mac
Manuel Alonso | 12/05/2021 14:00 | dzakawanda
Pepanhau rakasarudzika muApple uye tekinoroji, MacGeneration, yakaburitsa kuti zvinoenderana neruzivo rutsva rwavanarwo, Apple inotarisira kubatanidza iyo ICloud gwaro uye data data neICloud Drive sevhisi. Kubatana uku kunoitirwa kuitwe muna Chivabvu gore rinouya. Muna 2022, nekudaro ichipa vashandisi nguva yekuchinja.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kujekesa akati wandei emafungiro. Unogona kunge uchitozviziva, asi hazvimborwadzise kugona kutsanangura mushe zvatiri kutaura nezvazvo. Nekudaro, isu tinoziva kuti iCloud igore yekuchengetedza sevhisi iyo inoshandiswa kune akasiyana masevhisi ayo Apple anopa. Ndichiri ICloud Drive inoshanda senge OneDrive, semuenzaniso, sevhisi inopinda muICloud.
Ivo vanogovana yakakosha kugona kutsigira application data. Nekudaro, zvinyorwa zveCloud uye dhata zvaiwanzo kuve hwakaomarara uye kuvhiringidza chiitiko. ZvakapesanaICloud Drive yakanyanya kubatana, uye vashandisi vanokwanisa kuwana mafaera avo uye zvemukati kuburikidza neiyo Files app pane zvavo zvese zvishandiso.
Kutanga muna Chivabvu gore rinouya, vashandisi vanoshandisa zvinyorwa zveCloud uye dhata vanozoita maakaundi avo otamire otomatiki kuenda kuCloud Drive. Nekudaro, vashandisi vanofanirwa gonesa manzwi neCloud Drive kuona mafaira ako kamwe kusanganiswa kunoitika. PaMacs, isu tichafanirwa kuenda ku Sarudzo dzeSystem -> neCloud, uye sarudza iCloud Drayera pane macOS. Muna Chivabvu 2022, iro gwaro reCloud uye dhata sevhisi zvichamiswa zvotsiviwa zvizere neCloud Drive.
Maitiro anonzwisisika uchifunga kuti iyo Files App inoda kubva kubva kwatinogona kuwana dhata rese ratinaro pane chero eApple zvishandiso. ICloud Drive inova iyo yega musangano poindi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Apple yekubatanidza iCloud Zvinyorwa uye Dhata sevhisi neICloud Drive muna Chivabvu 2022